Kpọọ ọnụego kacha mma maka ụlọ Google gị | Androidsis
Hụọ ọnụego kachasị mma maka ụlọ Google
Ụlọ Google dịrịrị na Spain. Ọka okwu mara mma nke Google kwere nkwa ime ka ndụ dịrị ndị ọrụ niile mfe karịa ekwentị ha site na iweta Google Assistant na obi nke ụlọ ha. Ngwaọrụ ọhụrụ a site na njin ọchụchọ na - eduga gị iji chọgharịa nchekwa data gị ozugbo ma mebe iwu dịka ịgbanye ọkụ, itinye egwu ma ọ bụ ịlele ọnọdụ okporo ụzọ.
Dị ka a tụrụ anya, iji nwee obi ụtọ na ọrụ a niile ọ dị mkpa ịnweta njikọ ịntanetị nke na-enye ohere ka ngwaọrụ jikọọ na netwọk Wi-Fi. Kacha ọsọ taa bụ na ọ fọrọ nke nta ọ bụla nwa agbata obi nwere internet ọnụego n'ụlọ jikọọ ha ofu akụrụngwa: kọmputa, na smart TV, na smart thermostat ... Ma, ị maara ihe niile ụdị nke ego ịntanetị kedu ihe ị ga-akwụ ụgwọ jiri Googlelọ Gugulu gị?
1 Ngwakọta ngwakọta, eze nwanyị nke nhọrọ
2 Choo uzo ozo na netwoki wifi 4G
3 Kedụ gigs ka achọrọ m maka ngwa Google Home?
Ngwakọta ngwakọta, eze nwanyị nke nhọrọ
Ruo afọ ụfọdụ ugbu a, ngwugwu ngwugwu Ha bụ nhọrọ kachasị mma maka Spanish. Ndị a na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọrụ ọrụ nkwukọrịta niile ọnụ n'otu ụgwọ na ọnụahịa, n'ozuzu, dị ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na ha nwere nkwekọrịta iche. N'ihi ya, ha bụ nhọrọ kachasị asọmpi.
Obi abụọ adịghị ya, mobile + internet ọnụego (ma ọ bụ na-enweghị eriri ala) bụ nhọrọ dị irè ma dị ike iji ụlọ Google n'achọghị ịma banyere ya ịgbadoro. N'echiche a, anyị kwesịrị iburu n'uche:
La internet ọsọ ị chọrọ. Eziokwu bụ na ọrụ nke Homelọ Google nwere obere mmetụta na Wi-Fi network nke ụlọ gị, yabụ na-enye gị ohere ịga n'ihu na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara ọrụ ndị ahụ niile ga-agagharị na ọkà okwu Google. Iji maatu, ile ọdịnaya site na gụgharia vidiyo na Netflix (naanị otu ikpo okwu nke kwekọrọ na Google Home) ọ ga-adị mkpa ịnweta oke ọsọ iji zere ngwa ngwa.
El networkdị netwọk wifi ihe i nwere. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị nwere njikọ Wi-Fi ị nwere ike ịnweta ya Ntanetị 2.5G ma ọ bụ 5G. Eziokwu bụ na Homelọ Google dakọtara na netwọkụ abụọ mana 5G Wi-Fi na-enye ohere ka njikọ dị ike na ike. Nke a bụ n'ihi na o nwere ọtụtụ ọwa dị iji zipu ma nata data na akara ngosi.
La mobile data ọnụego Kedu ihe ị chọrọ. Tinyere ọrụ ịntanetị n'ụlọ, ọ dị mkpa ka ị nyochaa ihe mobile ọnụego ị ga-mkpa maka ama gi. Akụkụ a ga-adabere na oke ihe ị chọrọ mgbe ị na-anọghị n'ụlọ: ọnụ ọgụgụ nke data mkpanaka, ọnụ ahịa oku, wdg. Site n'enyemaka nke a ngwá ọrụ dị ka Roams ịntanetị na telephony comparator ị ga-enwe ike ịchọta nke kacha mma suut gị mkpa nke mere kwụkwala ụgwọ.
Otu n'ime ngwungwu kọntịntị ị nwere ike ịgba ụgwọ maka Google Home gị bụkwa mobile + internet + ọnụego telivishọn. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ekwentị na ịntanetị na-enye ọnụego telivishọn na ọbụlagodi ọrụ telivishọn nke ha. Movistar +, Orange TV, Vodafone TV ... Enwere otutu nhọrọ nke gunyere ọrụ ọdịnaya agbakwunyere dịka HBO, Netflix ma ọ bụ Sky.
Isi nkwarụ nke ọnụego ndị a na ụlọ Google? Nke ahụ, dịka anyị kwuru na mbụ, imirikiti ọrụ ndị a pụrụ iche adabaghị na ya; naanị Netflix. Otú ọ dị, na United States, ọrụ ntanetị dị ka HBO Go dị ugbu a iji rụọ ọrụ na Homelọ Google, ya mere Google agaghị ewe oge iji zụlite njikọ ya na ndị isi na-enye ndị Spain. N'ezie, ugbu a Telefónica abanyelarị Aura na Google Assistant N'ime ọrụ ndị ọzọ, a ga-atụ anya na ụzọ iji mezuo ihe ngwọta ndị ọzọ ga-adị mfe.
Choo uzo ozo na netwoki wifi 4G
na udu na 4G wifi mee nhọrọ a na-enweghị atụ maka ndị chọrọ ịnwe wifi iji Googlelọ Gugulu gị na-enweghị mkpa ibute nnukwu ọrụ nchịkọta. Ndị a na-ekwe ka obere ekwentị site na mkpanaka nke na-arụ ọrụ dị ka isi ihe ngosi mgbaàmà.
Onu ogugu 4G bu uzo ozo zuru oke ma ọ bụrụ na eriri eriri adịghị eru n'ógbè gị. Na mkpokọta, ọnụego ndị a na-enye ọsọ ọsọ ọsọ karịa ọsọ ADSL, nke bụ ọkwa doro anya iji melite ogo. Na mgbakwunye, ha anaghị enwekarị adịgide adịgide ma nye gị ohere iwere Wi-Fi ebe ọ bụla achọrọ maka na-arụ ọrụ na kaadị SIM.
Ọrụ nke Homelọ Google na 4G wifi ọnụego bụ otu ihe ahụ dịka yana ọrụ ịntanetị ọdịnala. Dịka onye ọrụ, ị gaghị achọpụta ihe dị iche. N'ezie, cheta na ọrụ a na-ebugharị bụ Wi-Fi ọ bụghị Googlelọ Google gị. Nke a ị ga-ahapụrịrị ya arụnyere n'otu ebe dị ka mgbe niile. Mgbe ị chọrọ iji ịntanetị, ị dị nnọọ mkpa ka Ikwupu ngwaọrụ na na ọ bụ ya.
Kedụ gigs ka achọrọ m maka ngwa Google Home?
Google adighi adighi eri. N'ihi ya melite Google Home ma nwee obi ụtọ na ya, ọ dị mkpa ibudata ngwa kwekọrọ na ekwentị gị.
La Google Home ngwa Ọ bụ otu ihe ahụ na - enye gị ohere ijikọ ekwentị gị na Chromecast iji zipu vidiyo na ọdịnaya gị na TV. Ojiji ya apụtaghị ibu ọ bụla na ngwugwu data gị, yabụ enweghị ihe egwu ọ bụla na megabytes ga-apụ gị maka iji ya.
Ihe ị kwesiri iburu n'uche na nke a bụ nchekwa na nnwere onwe nke ekwentị gị. Na-eburu n'uche na ngwa ahụ ga-adị mkpa naanị iji hazie ngwaọrụ gị maka izizi ma zipụ iwu ma ọ bụ ọdịnaya, gbalịa wepu ya ọbụna n’okirikiri mgbe ị na-ejighi ya nke mere na ọ gaghị anọgide na-eri ma ọ bụ na-ewere ohere mgbe ị na-anọghị n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Hụọ ọnụego kachasị mma maka ụlọ Google
Gaa n'ihu 11.11 na azụmahịa kachasị mma na eBay